watchOS 6.2.5 Beta 5 inogadziridza matatu emeso aripo ekurinda | Ndinobva mac
watchOS 6.2.5 Beta 5 inogadziridza matatu emeso aripo ekurinda
Vhiki rapfuura Apple yakaburitsa kune vagadziri yaive yechina vhezheni yeBeta 6.2.5 yeWatchOS. Zuva rapfuura zuro, kambani yakatangisa yechishanu vhezheni yevagadziri. Pakutanga zvaisaratidzika kuti paive nechinhu chitsva, zvisinei ikozvino iyo kumutsidzirwa kwematatu ematanho iyo ine Apple Watch. Isu tinotaura zvigadziriso nekuti kutaura kutsva, kwaisazove, mumaonero angu, kunyatsoita.
Makore mashoma apfuura, paWWDC 2018, Apple yakatanga nharaunda nhatu dzakasiyana asi iine maitiro akafanana. Iye akadaidza kana kuti akavadaidza iwo Pride akateedzana. Kufuridzirwa nerusununguko rwekuti chero munhu anogona kuda chero mumwe zvake zvisinei nevakadzi. Ivo vakawanikwa mune iyi nyowani Beta iwo anowanikwa nenzira yesarudzo dzekugadzirisa dzeGradient, Pride Analog uye Pride Dhijitari zviso zvekutarisa.
Muna 2019 akavamutsiridza zvakare kuwedzera akagadziridzwa mifananidzo uye zvakare kuunza nyowani nyowani Pride Analog wachi yekumeso. Iwo azvino 2020 inoratidzira yakawanda pastel shades ichienzaniswa neshanduro dzapfuura yezviso zvekutarisa.
Imwe yezvinhu zvitsva mumitatu yematunhu aripo ndeyekuti kubata kumeso kwewachi kunogadzira iyo chinja mukugadzira uye iwe unogona kuona iyo yekunakisa vibratory inoenderana nekukurumidza kwaunenge uchiibata. Iyo Pride Analog 2020 wachi yekutarisa inoshandura iwo mavara emakona pese paunosimudza ruoko rwako. Iyo mitsetse yekutarisa kumeso inoshaya kupatsanurana pakati peumwe neumwe mutsetse uchienzaniswa neshanduro dza2018 na2019 dzechiso chekutarisa.
Pachine zvimwe zvinhu zvinofanirwa kukwidziridzwa, asi chinhu chakachengeteka ndechekuti ivo vatove vanowanikwa mune inotevera Beta uye kana vasina chokwadi kuti vachazove mune yekupedzisira vhezheni iyo inosunungurwa kune veruzhinji. Tichaona kuti vari sei uye kana vachizopedzisira vaine zvigaro zvehumambo uye hunhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 6.2.5 Beta 5 inogadziridza matatu emeso aripo ekurinda
Ita zvakanyanya kutsvaga paMac yako nekutenda kuna Instantli
Vashandi veApple, Logic Pro X kugadzirisa, uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac